9 Nzira dzeKudzivirira PST File Corruption - DataNumen
musha Products DataNumen Outlook Repair 9 Nzira Dziviriro PST File Corruption
9 Nzira Dziviriro PST File Corruption
Outlook PST mafaira anowanzoita huori. Pane nzira here dzekudzivirira izvi? Mhinduro ndeye EHE! Pazasi ini ndinonyora 8 most nzira dzakakosha dzekudzivirira yako PST faira kubva kuhuwori kana kukuvara:
Usabatise yako PST faira. Kunyangwe Outlook 2003/2007 ikozvino ichitsigira mafaira ePST akakura se20GB. Uye Outlook 2010 inotsigira 50GB, ichiri kukurudzirwa zvakanyanya kuti yako PST faira haifanirwe kukura kupfuura 10GB, nekuti:
Most mashandiro ane hombe PST faira anononoka
Mafaira mahombe anogona kuve anoora.
Kunyangwe kumwe kuora kudiki kunogona kugadziriswa neAptlook kana scanpst, kana iyo PST faira iri hombe, saka gadziriro yekugadzirisa icharamba ichitora nguva.
Outlook 2003-2010 ikozvino inotsigira kuvhura akati wandei maPST mafaera pamwechete muboka reruboshwe. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kwazvo kufambisa maemail ako mufaira dzakasiyana dzePST nemitemo yeAptlook, kudzikisa saizi yefaira rega rega rePST.
Usarega yako yekare-fomati PST faira nzira 2GB. Microsoft Outlook 2002 uye shanduro dzekare dzinogumira saizi rePamoyo Mafolda (PST) faira ku2GB. Chero nguva iyo PST saizi faira iri padhuze ne2GB, iwe unosangana nematambudziko akasiyana uye iyo PST faira inokanganisa huwori. Naizvozvo, gara uine chokwadi chekuti yako yekare-fomati PST faira ishoma pane 1.5GB itsika yakanaka.
Usashandise pane hombe vhoriyamu emaemail. Microsoft Outlook ichafa-kukiya kana iwe ukashanda nhamba hombe yamaemail mune imwe nguva. Uye mushure mekufa-kukiya, uchafanirwa kuvhara Outlook zvisingaite izvo zvingangokonzera PST faira huori. Muganhu wekuziva ndewe 10,000 maemail. Naizvozvo, kana uchiedza kusarudza, kufambisa, kuteedzera kana kudzima anodarika zviuru gumi emaimeri, usashandise mune rimwe batch. Pane kudaro, shanda pa most 1,000 XNUMX maemail panguva, dzokorora mashandiro kusvikira maemail ese agadziriswa.
Usachengeta yako PST faira pane network drive kana server. PST faira rakagadzirirwa kuchengetedza pamakomputa emuno. Usachengete pane iri kure dhiraivha kana sevha sezvo netiweki nharaunda isingakwanise kutsigira kuomarara kuwana kweiyo PST faira uye inokonzeresa iyo PST faira huori kazhinji. Zvakare USAGADZE iyo PST faira pane network uye usatendera vashandisi vazhinji kuti vawane iyo imwechete kopi yePST faira kuburikidza nenetwork panguva imwe chete, iyo inokasira kufaira huori.
Usatadzise Outlook kana ichiri kushanda. Kana iwe ukavhara Outlook zvisina kujairika kana ichiri kushanda, ipapo iyo PST faira iri kuwanikwa neAptlook panguva iyoyo inozoshatiswa nyore. Naizvozvo, iwe unofanirwa HAKUNA vhara Outlook zvisina kujairika mune maneja webasa. Dzimwe nguva kana iwe ukavhara Outlook, icharamba ichimhanya kumashure, kugadzirisa mamwe mabasa, senge kutumira / kugamuchira maemail. Mumamiriro ezvinhu akadaro, nguva nenguva, iwe unogona kuona diki yeAptlook icon mune system tireyi. Nekudaro, nzira yakanakisa yekuona kana Outlook ichiri kushanda ndeye start "Task Manager" uye tarisa kana "OUTLOOK.EXE" iri mune "Maitiro" list (Ronga rondedzero kuti ikubatsire kuiwana zviri nyore.). Dzimwe nguva iwe unowana Outlook igare iri mundangariro nekusingaperi. Izvi zvinowanzoitika nekuti Outlook iri kuyedza kutumira / kugamuchira maemail kuburikidza netiweki uye network yako haishande nemazvo, saka Outlook inofanirwa kumirira isingaperi kana mushure mekubuda kwenguva. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kana iwe uchida kukasira iko kuvhara kweAptlook, ipapo unogona kudzima netiweki yekubatanidza inoshandiswa neAptlook nemaoko. Mushure meizvozvo, iyo yekubatanidza yeOptlook ichakurumidza kubuda-uye ichabvisa kumashure mabasa uye kubuda munguva pfupi. Kune zvimwe zviitiko, kana iyo Outlook kana Outlook tireyi ikaramba isingaperi, unogona kuedza Restart Outlook, mirira kwemaminetsi akati wandei, wozobuda, maitiro akadaro anogona kubatsira Outlook kubuda musystem zvachose.
Nguva dzose ita shuwa kuti Outlook yabuda usati wavhara / kudzima komputa yako. Kungofanana ne5, kana iwe ukavhara pasi kana kudzikisa komputa yako pasina kusiya Outlook, yako PST faira ingangove yakashatiswa. Saka, kunyangwe zvichikanganisa zvishoma, gara uine chokwadi chekuti Outlook yako yabuda usati wavhara komputa yako. Kana iwe unogona kugadzira diki app kuti utarise izvi kwauri otomatiki.
Ive nekuchengera neako AntiVirus chirongwa. Kana yako PST faira iri hombe uye iine maemail mazhinji, uye chirongwa chako cheAntVVV chichaichengetedza. Ipapo most yekushanda pamwe nemaemail muPST yako faira inozokanganiswa neako AntiVirus chirongwa futi. Kana chirongwa chikanonoka, ipapo mashandiro anozo deredzwawo. Zvinonzi mamwe mapurogiramu eAntivirus anogona kukuvadza iyo PST faira. Microsoft OneCare inogona kutodzima mafaera ePST.
Ive nekuchenjerera neiyo Outlook Wedzera-Ins. Dzimwe dzakashata Outlook Wedzera-Ins inogona kukonzera yako PST faira uori kana isina kugadzirwa nenzira kwayo kana kumhanya mushe. Naizvozvo, dzimwe nguva iwe unofanirwa kudzima iyo Wedzera-Ins kana yako PST faira ikashatiswa kazhinji.
Backup mafaira ako ePST vhiki nevhiki. Backup ndiyo yakanakisa nzira yekudzivirira kurasikirwa kwedata. Nguva dzose chengetedza mafaira ako ePST nguva nenguva kuitira kuti pese PST faira rako riine huwori uye risingakwanise kupora, unogona kudzoreredza yazvino backup.
Kana mafaera ako ePST akashatiswa, saka zvichiri kukwanisika kuagadzirisa nekuigadzirisa, nematurusi anotevera:
scanpst.exe. Zvakare inonzi Inbox Kugadzirisa Chishandiso. Ichi chishandiso chemahara chakaiswa neako Outlook. Inogona kugadzirisa most yezvikanganiso zvidiki uye huori mumafaira ako ePST. Rumwe ruzivo rwakadzama runogona kuwanikwa pa pano.
DataNumen Outlook Repair. Kana scanpst isingakwanise kugadzirisa yako PST faira, kana isingakwanise kudzoreredza maemail aunoda, saka unogona kushandisa DataNumen Outlook Repair. Inogona kupora yakaipa kwazvo PST faira. Chero bedzi paine chero dhata reOptlook riripo mune yako yakaipa PST faira, ipapo DataNumen Outlook Repair inogona kuvadzorera uye kusevha mune nyowani yakatarwa PST faira.